အ​မေရိကန်​ ဗဟိုဘဏ်​ အစည်းအ​ဝေးပွဲ နှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ် ဆွေးနွေးပွဲများသည် Forex ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် အရေးကြီးသည့် ဆွေးနွေးပွဲများပင်ဖြစ်ပါသည်. စက်တင်ဘာဆွေးနွေးပွဲသည်လည်း အရေးကြီးသည့် ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်၏ ဘဏ်အတိုးနှုန်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စက်တင်ဘာ ၂၀ရက် ၂၁:၀၀ MTအချိန်တွင်ပြုလုပ်မည့် FOMC ဆွေးနွေးပွဲတွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်. ၂၁:၀၀ MTအချိန်တွင်ပင် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဂျဲနက်ရယ်လန်၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ကျင်းပပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်.
အတိုးနှုန်းတင်နိုင်ခြေကို ဈေးကွက်က မမျှော်လင့်ထားသော်လည်း Fed၏ balance sheetများကို လျှော့ချမည့်အစီအစဉ်နှင့် ပက်သက်သည့် သတင်းစကားများကို နားစွင့်နေကြပါသည်. ဂျဲနက်ရယ်လန်၏ သဘောထားမှတ်ချက်များက ဈေးကွက်ကို လှုပ်ရှားစေပါလိမ့်မည်.